Ihe mere anyị ji hụ anyị n'anya
Nchikota nke plastik siri ike na plastic plastik na - eme ka nchedo siri ike maka ịdaba ruo 11 ụkwụ. Port gị nwere bọtịnụ siri ike na-ekpuchi na ihe mmeghe. Ọ bụ oji, ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ na isi awọ. Ndị na-eme achịcha na-eme achịcha, na mmekorita ya na mmekorita nke okike okike, emebere usoro folda mara mma maka Galaxy S8, na-egosi usoro nke ifuru kachasị ọhụrụ.
Mgbe ahụ ị nwere ike itinye ụfọdụ ahịhịa / ahịhịa, obere akwụkwọ, Rocks, alaka, wdg ma ọ bụrụ na-amasị gị. Mepụta mpaghara nri na-enye anụ oriri maka ndanda. N'ihi na ndanda na-ahọrọ mmiri ọkara, ịkwesịrị ịgbakwunye obere mmiri. Ohịhịa ala. Tinye ala nke karama 2 n'elu. Tụgharịa ya na ala ya ma gbanye ya n'ime 2-
You nwere ike ịzụta otu maka ụlọ oyi gị na usoro nchekwa ọzọ maka ụlọ oge ọkọchị gị. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere usoro nchekwa ụlọ. May nwere ike zute onye na-ere ahịa na-ere ahịa ruo n'ụlọ. Onye ndu na nchekwa ezinụlọ bụ ADT. Ọ bụrụhaala na ị na-abanye nkwekọrịta maka ọrụ nlekota, ị nwere ike iwunye Mkpu ADT n'efu.